लकडाउनको विषयमा सेलीब्रेटीहरु के भन्छन् ? « Kalakhabar
लकडाउनको विषयमा सेलीब्रेटीहरु के भन्छन् ?
प्रकाशित मिति : शुक्रबार, १४ चैत्र २०७६ १३:५२
कलाखबर,१४,चैत्र–काठमाण्डौं । विश्वमा महामारीको रुपमा फैलदै गएको कोरोना भाइरस ९कोभिड –१९¬० नेपालमा पनि ३ जनामा देखा परिसकेको छ । विश्वमै चुनौतिको विषय बनेको यो भाइरस रोकथामका लागि नेपाल सरकारले मंगलबारदेखि एकसाताका लागि लकडाउन गरेको छ । सरकारको यो निणर्यले देश ठप्प छ ।
स्वास्थ्य भन्दा काम ठुलो होइन भनेर सबै पक्षबाट यो कदमको पालना भइरहेको छ । नेपाली कलाक्षेत्रका विभिन्न कलाकार पनि सरकारको लकडाउन कदम स्वागतयोग्य भएको बताउँछन् । उनीहरुले लकडाउन नियम आफूले पालना गरिरहेको बताउँदै सबैलाई कोरोनाबाट बच्न सरकारले बनाएको नियम पालना गर्न समेत सुझाएका छन् । लकडाउनको समयमा कलाकारको क्रियाकलाप र सर्वसाधारणलाई दिएको सन्देश उनीहरुकै शब्दमाः
विश्वभरीनै कोरोना भाइरसले आतंक मच्चाएको छ । यो अवस्थामा सरकारले गरेको लकडाउन पूर्ण रुपमले पालना गर्नुपर्ने मेरो धारणा छ । यो आफ्नै लागि हो । अहिलेको समय घरमा बस्नु, बाहिर ननिस्किनु भनेको सुरक्षित हुनु पनि हो । सावधानी कोरोनाबाट जोगिने सबैभन्दा राम्रो उपाय हो । म पनि केही दिनदेखि परिवार सहित करेन्टटाइममा छु । चितवनको भरतपुरमा निर्माणधीन रंगशालको काम समेत स्थगित गरेर म घर फर्किएको हो । सबैलाई यो रोगबाट जोगिन सरकारले बनाएको नियम पालना गर्न आग्रह गर्दछु ।
मेरो युरोप, अरब, साइप्रस लगायत करिव एक दर्जन देशमा कार्यक्रम राखिएको थियो । त्यो सबै छोडेर घरमै बसेको छु । केही दिन अगाडि गीत रेकडिङमा पनि व्यस्त थिएँ । अहिले सबै काम छोडेर घरमै बसेको छु । सरकारले गरेको लकडाउन सबैले पालना गर्नुपर्छ । यो कोरोनाबाट जोगिने सबैभन्दा राम्रो उपाय हो । लकडाउन सबैले पालना गरौं भन्ने अनुरोध छ ।
कोरोना भनेको महामारी हो । अहिलेको अवस्थामा यो रोगबाट भाग्नु नै बुद्धिमानी मानिन्छ । सरकारको नियम पालन गरेर म सेल्फ क्वारेन्टाइममा बसिरहेको छु । एकै ठाउँमा बस्ने बानी नभएर होला गाह्रो हँुदोरहेछ । केहीले यो आदेश पनि नटेरेको देखिरहेकी छु । रोगबाट जोगिन सरकारले बनाएको नियमको आफू पनि पालना गरौं र आफन्तलाई पनि पालना गर्न लगाउन भन्छु । लकडाउनको नियम पालना गरेर कोरोनाबाट बच्न सकिन्छ ।
म घरबाट बाहिर ननिस्किएको ५ दिन भैसक्यो । कोरोनाको डर धेरै लागिरहेको छ । परिवार पनिसँगै छन् । आफ्नो र आफन्तको स्वास्थ्य भन्दा ठुलो कुरो केही होइन मेरो लागि । सरकारले गरेको लकडाउनलाई मैले सकारात्मक रुपमा हेरेकी छु । आफू पालना गर्छु अरुलाई पनि सरकारको आदेश पालना गर्न अनुरोध गर्दछु ।
सरकारले लकडाउन गर्नुभन्दा १० दिन अगाडिदेखिनै म घरबाट बाहिर निस्किएको छैन । कोरोनाबाट बच्न यो भन्दा ठूलो उपाय अहिले अर्को छैन । यस्तो अवस्थामा कहिँ ननिस्किकन परिवारसँग बस्दा एक प्रकारको रमाइलो त छ । तर धेरै समय बस्दा एक किसिमले छटपटी हुँदो रहेछ । तर पनि रोगका लागि यो सहनु पर्छ । सबैलाई घरबाट बाहिर ननिस्किन अनुरोध गर्दछु ।
सरकारले यस्तो कदम लिँदैन कि भन्ने डर थियो । सरकारले राम्रो कदम चाल्यो । यो कदम हामी सबै जनताको हितमा छ । कोरोनाबाट बच्न र अरुलाई पनि बचाउन हामी सबैले सरकारले बनाएको नियम पालना गर्नुपर्छ । यसले व्यवसाय, काम लगायत धेरै कुरामा केही समय असर पार्ला । तर स्वास्थ्य भन्दा ठूलो कुरो अन्य होइन भनेर सबैले बुझ्नु पर्छ ।